Wasaraada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dawladda Pl ayaa hirgalisay barnaamij Soft ware cusub oo Computerized ah oo lagu la soconayo Dhamaan xogta Waxbarashada Puntland. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ December 11, 2018
12/11/2018- Wasaraada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dawladda Pl ayaa hirgalisay barnaamij Soft ware cusub oo Computerized ah oo lagu la soconayo Dhamaan xogta Waxbarashada Puntland.
Barnaamikan Computrized ah oo cusub ayaa markii ugu horeysay sahlaya soo gudbinta, la socodka iyo kaydinta Waxbarashada deeganada Puntland , waxaana xarunta Wasaaradda waxbarshada lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu soo gabagabaynayey tababar socday mudo Saddex maalmod ah.
Tababarkan iyo faa’idooyinka barnaamijkan cusub oo ay hirgalisay shirkad laga leeyahay dalka Hindiya ayaa waxaa bixinayey Tababarka Madaxa Emista ee Waxaada Qorshaynta ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare Jaamac bulshaale iyo Eng ismaaciil oo dhashay dalka Hindiya iyo khabiir ku xeel dheer arimaha software casriga ah eng Axmed Colaad.
Iyagoo u hagar baxay sadex maalmood ugana faiideyeyey casharo hormar fiican laga samayn karo iyo shaqalaha Waaxda qorshaynta ahmiyada waxbarashadu u leedahay in la helo xog dhamaystiran oo ku saabsan dhamaan Waxbarshada Puntland.
Ujeedada Tabarkan ayaa ka hadashay Agaasimaha Waaxda qorshaynta ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare Asmaa C/qaadir Maxamed oo ku tilmaamtay in New software Agabkan Casriga naga saacidi doono shaqadii dhibka badanayd oo manaul ahayd in la soo koobay oo loo daadajiyey Gobolada xogta Emistana looga soo xaraynayo Gobolada.
Waxaa dhamaan lagu tababaray shaqalaha dhexe iyo heer gobol ee Waxbarashada Puntland iyadoo u tahay maamul dajin xogta Waxbarashada Puntland, iyadoo Wasaaraddu ubahan tahay in la helo xog dhab ah oo lagu kabidoono waxyaalaha la hiigsanayo mustaqbalka dhow.
Wasiir Dowlaha Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare Yaasiin Cabdi seed ayaa ku adkeyey in shaqalaha loo tababaray agabkan casriga ah iyo xogta Waxbarashada inaysan dayicin lagunala xisaabtamayo masuuliyad gooniya ay ka saaran tahay gobol walba.
Wasiir Dowlaha Waxabarashada ayaa yiri Dhib badan ayaa loo soo maray agabkan Computrizedka ah lakin waa ina ka faii’daysanaa waxtarna ka helnaa si loo helo waxbarasho xog fiican xambarsan iyo mid tayeysan.
Wasiir Dowlaha Waxbarashada iyo Tacliinta sare Mudane Yaasiin seed waxaa kalo mahad celin u soo jeediyey dhamaan shaqalaha ka fa’iidaystay tababarkan iyo Compny sida wanagsan ula shaqayeeyey Wasaarada Waxbarashada Puntland.
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare Abshir Yuusuf Aw Ciise oo tababarka soo xiray isagoo la dardarmay shaqalihii qaatay tababarka isagoo ku tilmaamay tani guul wanagsan u tahay bahda Waxbarashada Puntland.
Wasiirka ayaa sheegay in shaqalaha gobolada hormar wanagsan ka samayn doonan xogta Emista iyadoo adeegsanaya agabkan casriga ah.
Wasiirka waxaa kalo yiri mudo intee la eg bay nagu qaadatay in la helo agabka noocan ah balse waa helnay lakin waa inay sidii la rabay looga soo baxaa. Waxaa kaloo kala dardaarmay shaqalaha Gobolada agabkan waa ina biyaha, korantada looga tagin, boorka iyo ciida laga ilaaliyaa iyo waxii cilad ku keenaya Aganka ,taxadar badana ka samaysaan.
Hoos ka Daawo sawirdda.
By Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaarada Waxbarshada iyo Tacliinta sare